Isi ihe dị mkpa Mgbe ịhọrọ usoro ire ere (POS) Systems | Martech Zone
Ebe a na-erere ihe (POS) bụ otu ụzọ dị mfe, mana enwere ọtụtụ nhọrọ ugbu a, nke ọ bụla na-enye atụmatụ pụrụ iche. A siri ike ebe ire ere nwere ike ime ka ụlọ ọrụ gị rụọ ọrụ nke ọma ma nwee mmetụta dị mma na akara ala.
Kedu ihe bụ POS?
A Ebe ire sistemụ bụ ngwakọta ngwaike na ngwanrọ na-enyere onye ahịa aka ịre ma nakọta ịkwụ ụgwọ maka ire ahịa ọnọdụ. Usoro POS nke oge a nwere ike ịdabere na ngwanrọ ma nwee ike iji ekwentị mkpanaaka, mbadamba, ma ọ bụ desktọọpụ ọ bụla. Usoro POS ọdịnala gụnyere ngwa ngwanrọ nwere nkwado ihuenyo mmetụ na ntinye ọnụ.
Isiokwu a ga-ekpuchi ihe niile ịchọrọ ịma iji họrọ ebe ị na-ere sọftụwia maka azụmahịa gị. N'iji ọtụtụ ngwọta dị iche iche dị, ọ dị oke mkpa ịme nyocha tupu oge eruo ma chọpụta nke dabara na mkpa ika gị.
Ọ bụ Usoro Nhazi Ahịa Ọ Dị Mkpa n'Ezie?
Businessesfọdụ ụlọ ọrụ na-anwa ibelata ụgwọ site na ịme enweghị azịza ọrịre, mana itinye ego a nwere ike kpata ego maka ụlọ ọrụ gị. Obere ego ị na-akwụ na ndenye aha ahụ abụghị ihe ọ bụla ma e jiri ya tụnyere oge na ego ị ga - echekwa ụbọchị ọrụ ọ bụla.
Na mgbakwunye na ịkwalite azụmahịa, usoro ire ere nke oge a na-enye ọtụtụ ngwaọrụ eji eme ka akụkụ ọ bụla nke azụmaahịa gị na-aga nke ọma. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ilekwasị anya na mmekọrịta ndị ahịa, dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọta isi okwu nke ire ere nke gụnyere mmemme iguzosi ike n'ihe na atụmatụ ndị ọzọ dị mkpa. Ọzọkwa, ọtụtụ ọrụ na-ejikọta ngwa ngwa na ngwa ndị ọzọ a ma ama dị ka Shopify na Xero.
Usoro dị iche iche maka azụmahịa dị iche iche
Ebe a na-ere ahịa na-eleba anya na ụlọ ọrụ dịgasị iche iche gụnyere ma ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na ụlọ ọrụ nwere ụlọ ahịa anụ ahụ. N'iburu nke ahụ n'uche, ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla ịchọta nhọrọ nke kwekọrọ na mmefu ego gị na oke akara gị.
Ọzọkwa, ọtụtụ usoro na-agagharị na usoro igwe ojii nke na-agbasa ozi site na iwepu ya na ngwaọrụ ọ bụla. Ọ bụ ezie na usoro ọdịnala ka dị, uzo ozo nke igwe ojii na-ewu ewu na-ewu ewu.
5 Igodo isi mgbe ị na-ahọrọ POS
Hardware - Ebe dị iche iche a na-ere sistemụ dị iche iche ka arụ ọrụ dị iche iche nke ngwaike, yana ịkwesịrị ịtụle ụgwọ ngwaike mgbe ị na-atụle nhọrọ gị. Ọ bụrụ na ịnwere ike iji POS naanị ekwentị, dịka ọmụmaatụ, ị na-emezi ọrụ mgbe ị na-agbakwụnye obere. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ mmemme na-arụ ọrụ nke ọma na mbadamba ma ọ bụ ngwaọrụ ndị raara onwe ha nye, nke nwere ike ibute ọtụtụ ụgwọ. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ buru ibu na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na-achọkarị ngwaike nke akụrụngwa, gụnyere ihe ndị dị ka ndị na-ebi akwụkwọ maka akwụkwọ nnata, ọnụ maka njikwa tebụl, na ndị ọzọ.
Ọnụ Ụzọ Ịkwụ Ụgwọ - systemzụ usoro POS apụtaghị na akpaghị aka ijikọ ụgwọ ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ. Ọ bụ ezie na a na-ahazi ọtụtụ POS sistemụ maka onye na-agụ kaadị akwụmụgwọ, ndị ọzọ nwere ike ịchọ ịhazi, nke nwere ike ịfu gị. Chọta POS yana onye na-agụ akwụkwọ ma ọ bụ nke nwere ike iwekota na onye na-agụ kaadị kredit n'aka onye na-akwụ ụgwọ gị na ọnụ ụzọ ámá gị.
Mmekọrịta nke atọ - Imirikiti azụmaahịa ejirila ọtụtụ ngwa ọrụ arụpụtara, yana ọ dị oke mkpa ịchọta ọrụ ire ere nke na-arụ ọrụ nke ọma na omume ndị ị nwere Mmekọrịta ndị a ma ama gụnyere sistemụ ndekọ ego, sistemụ njikwa ndị ọrụ, sistemụ ahịa, sistemụ ahịa ndị ahịa na ọrụ mbupu. Ebe a na-ere ahịa nke Square, dịka ọmụmaatụ, na-ejikọ ọtụtụ nyiwe nke ndị ọzọ maka ihe niile site na eCommerce na ahịa na ajụjụ. Enweghị njikọta, ịgbakwunye ọrụ ọhụrụ na atụmatụ gị nwere ike ime ka isi rụọ ọrụ dị mgbagwoju anya. Usoro nke ire ere bụ maka arụmọrụ, yabụ iji arụ ọrụ nke anaghị ekwupụta ngwa ndị ọzọ anaghị arụpụta ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ịbubata azụmahịa na-akpaghị aka n'ime ọrụ ịme akaụntụ na-arụ ọrụ nke ọma karịa iji aka na-ebufe ha n'etiti ngwa.
Security - Ndị ahịa na-ewere nzuzo ha karịa mgbe ọ bụla ọzọ, na data hacks bụ ihe ijuanya na-adịkarị n’etiti azụmaahịa niile nha. Ndị njikwa na-elegharakarị mkpa ọ dị idobe data anya, nke a dịkwa mkpa mgbe ndị ahịa na-enye ozi dị nro dịka nọmba kaadị akwụmụgwọ. Na Industrygwọ Kaadị akwụ ụgwọ na-akọwa ụkpụrụ nchekwa dị mma maka usoro ire ere yana usoro ndị ọzọ nke ịkwụ ụgwọ. Mmemme a ma ama na-agbaso ụkpụrụ ndị a, mana ị nwekwara ike ịchọ nchedo siri ike karị, dị ka nsonye data na njedebe ịkwụsị izo ya ezo. Nchedo kwesiri ibu ihe mbu gi mgbe ichoro ngwa POS.
nkwado - nwere ike ọ gaghị eche maka nkwado dị ka atụmatụ dị oke egwu, mana netwọkụ nkwado na-adịghị mma nwere ike ime ka usoro ịre ahịa gị dịkwuo ike iji. Nhọrọ ndị a pụrụ ịdabere na ha na-enye nkwado na-agbanwe agbanwe ma na-enyere gị aka dozie nsogbu tupu ha emetụta azụmahịa gị n'ụzọ na-adịghị mma. Ọ bụrụ na enwere ike, ị kwesịrị ịchọ ọrụ na-enye nkwado 24/7. Ọ dị mkpa ịmata na mmadụ ga-aza mgbe ọ bụla ị nwere nsogbu na sistemụ ahụ. Ngwa ụfọdụ na-enyekwa ndị ọrụ ọhụụ aka na saịtị ahụ ka ha guzobere ọrụ ahụ maka oge mbụ. Obere azụmaahịa na-akwụsị itinye ego na azụmaahịa azịza, mana ndenye aha dị elu nwere ike ịba uru maka ụlọ ọrụ nke ọ bụla. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mkpa ị ga-ebu n'uche mgbe ị na-atụnyere ọrụ ire ere.
Tags: igwe ojii POSigwe ojiiekwentị mkpanaakaọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọnaangwaikengwanrọihuenyo mmetụ aka
Otu esi enyere ma bulie WordPress maka onyonyo aputara